शान्ति राज राई “वाम्बुले” को जीवन दाईलाई पत्र ! – Rajyasatta.com
Reading Now शान्ति राज राई “वाम्बुले” को जीवन दाईलाई पत्र !
शान्ति राज राई “वाम्बुले” को जीवन दाईलाई पत्र !
सकुशल हुनुहुन्छ होला सकुशलताको कामना गरे । आदरणीय जीवन दाई, खै म कसरी सुरु गरु यी पत्रका हरफहरु मैले तपाईको विविध विषयमा नजानेर अनेक सब्दहरू प्रयोग गरेको थिएँ त्यसैमा हजुर प्रति एक भाईले अन्जान बाट भएको ट्रुटीका लागि तपाईं प्रति हृदय देखि नै क्षमा प्रार्थी छु ।
यो मानेमा कि माफी चाहन्छु की एउटा मानव भएर मानवता ब्याबहार सम्बोधन गर्नु पर्नेमा आवेगमा आएर केही शब्दहरू ट्रुटीपुर्ण र अलि नै असन्दार्भिक थियो । अब बिषय तिर लागौ नेपाल एउटा यस्तो देश हो । कागले कान लग्यो भन्दैमा कानै नछामी त्यस्को पछाडि दौडने नेपाली प्रबृत्तिले बारम्बार दु:ख पाई रहेका छौ त्यो धुर्व सत्य हो । त्यसैको सिकार भईन नेपाल आमाकी बुहारी हाम्री प्यारी जोया भाउजू र तपाईंले प्रतक्ष बेहोर्नु प¥यो ।
मैले भाउजुलाई लेखेको चिठिमा स्पष्टीकरण ढंगले तपाईंको बारेमा लेखेको छु । किन कि त्यहाँ तपाईंको कुनै उपस्थितिको माग गरिएन सोधपुछको आवस्यकता पनि तर, मलाई त्यतिनै बेला मन भित्र लागेको थ्यो “दालमे कुछ काला हे” पक्कै पनि फिलिपिनी विदेशी नागरिक जोया नेपाल आउनु चानचुने कुरा पनि थिएन ।
ऊनि तपाईंको साच्चिकै प्रेममा पर्नु भयो होला त्यो भगवान जान्ने कि तपाईं दुइले जान्ने कुरा हो । तपाईंले अहिलेको निकै चर्चामा रहेको “खासखुस” नामक टेलिश्रृखला त सायद हेर्नु भएकै होला ? जुन केशमा साच्चिकै तपाईंहरु विचमा भएको घटना संग मेल खान्छन् त्यहाँ एउटा यस्तो दृश्य समावेश गरिएको छ जुन दृश्यको सम्बादले मलाई पनि यहि कुरा लागू भएको आभाष खड्किएको छ ।
तपाईंको समर्थनमा आएको लेखहरु हेरिरहेको छु केही सत्य र केही कपोकल्पित फिल्मका दृश्य जस्तै छन । तपाईंले सामन्य वादविवादका कारण देखाउँदै जोयालाई एउटा आदर्श गृहका उच्च पदाधिकारीले विभिन्न सान्त्वना देखाउँदै लगेको तपाईंलाई लिन जाँदा तपाईं र ती बृद्ध आमाले विभिन्न धाक, धम्की तथा आरोप खेप्नुपरेको आदि आदि यस्तै दुखेसो पोख्नु भएछ ।
यी विविध वाधा अवरोध समस्याका बारेमा तपाईंको निजि फेशबुका संजालमा किन लेख्न सक्नु भएन ? जोया भाउजुले जाँदा जाँदै, त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमान स्थल बाट मन भरी विछोडिएको पिडालाई सम्हाल्दै Take Care You & ur Mum साथै, आफ्नो स्टाटुसमा “मलाई नसोध म कोहु भनेर नेपालको चन्द्र सुर्य छापमा औठा छाप लाको तस्बिर पोस्ट गर्नु भएको छ ।
साच्चिकै उहाँमा तपाईं र नेपाली प्रती माया थिएन भने यसो गर्नु हुन्नथ्यो नै होला ? जति नै पतिको विकृति विसंगति भए पनि पत्नीलाई माया हुन्छ त्यसै गरी जतिनै पत्नीको विविध समस्याहरू भए पनि आफ्नो पतिलाई माया हुन्छ । त्यसैगरी तपाईंका ती अवोध दुई बच्चाको अविभावक भै सक्नु भएको छ ।
जोया भाउजुले भने जस्तै तपाई जतिनै दुर्व्यसनी भएनी आफ्नो रगतको माया तपाईंकै मनमा होला त ? त्यसैले त त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमान स्थल बाट आफ्नो माईतीदेशको यात्रा तय गर्नु पुर्व निकै भावनात्मक मुद्रामा Take Care u & ur Mum हृदय स्पर्सी सब्द सायदै मैले सिकाई रहनु पर्दैन त्यो तपाईंकै मनमा पनि बितिरहेको होला ? यी भावना तिर नबगी यो चिठी लेख्नुको आसय तिर जाऔ । तपाईंहरु जस्तै पीडितको मलम लाउन र छिटो र छरितो एक अर्कालाई नजिक बनाएको समाजिक सञ्जाल बाटै म भन्न चाहन्छु ।
तपाईं एउटा प्रदेश नम्बर १ को स्थाई नागरिक र मेरो छिमेकी जिल्ला सोलुखुम्बुको हुनुहुदो रैछ । म छिमेकी जिल्ला मात्रै नभै, तपाईंलाई एउटा भाइको नाताले पुर्ण सहयोग गर्न तयार छु र सारा नेपाली जनता तैयार छन । किनकि जस्ले जे भनेनी जोया भाउजू माथी अन्याय भएको छ । जोया भाउजुले न्याय पाउनु नै तपाईंको जित हो न्याय यो अर्थमा नि हुन्छ किनकि ती दुई अबोध बालक नेपाली हुन उनिहरुले नेपाल सरकार बाट पाउनु पर्ने सेवा सुबिधा संगै न्याय पाउनु पर्छ । त्यो हामी र हाम्रो समाज दिलाउन तैयार छौ ।
म यो चिठी लेखेर मात्रै बस्ने हैन वर्तमान परिपेक्षमा भन्नू पर्दा न्याय, पहिचान र अधिकारका लागि संविधान संसोधनका लागि गाउँ बस्तिका नागरिकलाई जागरूकता संगै सचेतना जगाउँदै परिवर्तनका लागि संघर्षरत छौ ।
यो उदघोष पनि भयो साच्चिकै आदर्श गृहले त्यो गम्भीर भुल गरेको हो भने यो देसको लाखौ सचेत युवाहरू बाट तिरस्कृत हुने निश्चित छ । विभिन्न पटक भएको संघर्ष त्याग बलिदानले नै देशमा परिवर्तनको लागि चल्दै आएको देश हो । राणा, पञ्चायत, निर्दल, बहुदल, राजा जो जो जनताको विरुद्ध आए जनताले सबैको अन्त्य गरेको ईतिहास साक्षी छ ।
अन्तत आदर्श गृह पनि अछुतो नरहला ? अरु कुरा नगरौ हाम्रो मानव स्वाभाव नै बन्यो अरुको गल्तिमा न्यायाधीश बन्ने र आफ्नो गल्तिमा वकिल बन्ने । अरु धेरै कुरा गरेर यी चिठिको हरफ लम्ब्याउनु भन्दा साच्चिकै पीडामा छौ र तपाईं माथी अन्य भएको छ भने हामी लाखौ न्याय प्रेमी जनता हरु तपाईंको पक्षमा छौ । आउनुस खुल्ला हृदयले तपाईंको स्वागत र तपाईंको न्यायको लागि हामी जस्तोसुकै सहयोग र संघर्ष गर्न तयार छौ ।